Andalusia ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzezviitiko muEurope
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Spain Kuputsa Nhau » Andalusia ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzezviitiko muEurope
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Andalusia inopa akawanda mikana yezviitiko. Andalusia, uye kunyanya dunhu reCadiz, ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzezviitiko muEurope nezvivakwa zvayo zvakagadzirwa.
Andalusia nenharaunda yeCadiz ndiyo yekumaodzanyemba kwenzvimbo gumi nenomwe dzeSpain dzinozvitonga uye iri munzvimbo yakaoma. Andalusia inogumira kuCastile-La Mancha neExtremadura kuchamhembe neMediterranean neAtlantic Ocean kumaodzanyemba. Murcia iri pamusuwo wayo kumabvazuva uye Portugal kumadokero.
The Cadiz dunhu kunyanya yanga iri nzvimbo yakabatikana yezviitiko uye zvinokurudzira varongi kwemakore. Izvi zvinosanganisirawo vagadziri vemotokari. Ndeupi mutori wenhau dzemotokari asati ambosvika kudunhu reCadiz? Zvisinei, hapana chinonakidza, asi "isingazivikanwe" Andalusia, semuenzaniso Costa de la Luz ("Coast of Light"), iyo inotambanuka ichitevedza mahombekombe eAtlantic kubva pamuromo weGuadiana pamuganhu weSpain-Portuguese kuenda kuTarifa Gwara reGibraltar.
ICosta de la Luz ine mamiriro ekunze akagadzikana mazuva mazana matatu nemakumi matatu pagore. Tembiricha dzakaita sedzematsutso dzinogona kuwanikwa pano munguva yechando - chete maawa anenge 360 nendege kubva kuGerman. Uye mamiriro emigwagwa akakwana, anoshuvira zviitiko zvemotokari, izvo zvinowanzoitirwa pano. Iyo yose nzira network yakaramba ichivandudzwa uye ichiwedzerwa mumakore apfuura. Pamhando dzese dzemotokari - ingave ina-mavhiri ekutyaira, mota yemitambo, limousine kana mota dzekutengesa nemarori - pane nzira dzakaringana dzemumugwagwa: Serpentines, migwagwa pagungwa, off-road terrain uye kunyangwe mujaho wetsiva uripo muCadiz nharaunda.
Migwagwa mikuru, migwagwa nemigwagwa yemunyika zvinokutora iwe kuburikidza nehunhu husina kuvharwa uye nzvimbo dzisina kuvandudzwa, izvo zvisingatombo shanduke zvachose nekuda kwemamiriro akaomarara anoiswa nezviremera. Hapana hotera inogona kuvakwa pamusoro pemuti wemuchindwe, unokwana nhurikidzwa mbiri. Pakati peimwe hotera negungwa kazhinji inzvimbo yekuchengetedza zvisikwa.
Kuwanikwa kwe Cadiz dunhu uye iyo Costa de la Luz inogona kurongwa kuburikidza neJerez airport.
Gastronomic kupihwa kweCadiz
Tsika yekupihwa kweCadiz
Wineries (zvekare zvezviitiko)